ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် နှာခေါင်းစည်းအခုရေ(၁၃)သိန်းလှူဒါန်းမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့စက်ရုံ - Cele Gabar
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် နှာခေါင်းစည်းအခုရေ(၁၃)သိန်းလှူဒါန်းမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့စက်ရုံ
ပရိသတ်ရဲ့ အချစ်တော် မပွတ်ကျွတ်ခေါ် မခိုင်လေးကတော့ ဒီနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် နှာခေါင်းစည်း တပ်ခြင်းက အဓိကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဝတ်နှာခေါင်းစည်းအခုရေ (၁၃)သိန်းလှူဒါန်းပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒိန်းမတ်သံရုံးကနေပြီးတော့ YCDC သို့ သိန်း(၃၀၀)တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဝတ်နှာခေါင်းစည်း အခုရေ(၅၀၀၀၀) ကို မြို့တော်ခန်းမမှာလာရောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဆက်လှူဒါန်းပေးသွားမယ့် သိန်း(၈၀၀၀) တန်ဖိုးရှိ နှာခေါင်းစည်းအခုရေ (၁၃)သိန်းကို မခိုင်လေးရဲ့ စက်ရုံဖြစ်တဲ့ Golden KTK Garment အပါအဝင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ (၉)ရုံက ပူးပေါင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ..
မခိုင်လေးကတော့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အလှူလေးမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တဲ့အပြင် ” ဒိန်းမတ်ပြည်သူပြည်သားတွေကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…. မြန်မာပြည်သူပြည်သားများလည်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…. ကမ္ဘာကြီးလည်း Covid လုံးဝကင်းစင်ပါစေ” ဆိုပြီးတော့လည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဆုတောင်းစကားဆိုခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အလှူမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ် မခိုင်လေးရေ…
Previous post “ရွက်လှေ” သီချင်းကို အခွီရိုက်ကူးထားတဲ့ Do Pauk ရဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကို သဘောကျနေတဲ့ G Fatt
Next post ဂျီဟောသူ ရိုက်ကွင်းကအမှတ်တရတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ဖော်ပြလာတဲ့ မေမီကိုကို